Deg Deg:Taliyihii Isaaq Ee Fara Xumeeyay Maxaabiista Jeelka laascaanood Oo Baxsaday iyo Dhaawac Soo Gaadhay – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Taliyihii Isaaq Ee Fara Xumeeyay Maxaabiista Jeelka laascaanood Oo Baxsaday iyo Dhaawac Soo Gaadhay
Waxaa Goordhaweyd baxsaday oo si dhuumasho ah uga cararay magaalada Laascaanood, Taliyihii Xabsiga dhexe ee Beesha isaaq.
Taliyahan oo lagu magacaabo jaamacQoomaluud. ayaa dhawaan damaaciyay Qaar kamid ah Maxaabiista Jeelka ku xidhan kuwaaso fashiliyay isku dayga qooma luudnimada ah ee Taliyaha Habar Jeclo damcay.
Mudo labo Todobaad ah waxaa laascaanood, ka taagnayd xaalada iskudayga Damaaciga raga ah ee uu sameeyay taliyahaasi taaso abuurtay xiisad xoogan.
Galinkii danbe maanta ayuu taliye Qoomaluud ka baxsaday laascaanood isagoo afar aan cidi la ogayn oo dhuumasho ah kagana cararaayo arrinta uu sameeyay ugu anbabaxay Gobolka togdheer oo u deegaan ahaan ka soo jeedo.
Saacadihii uu ku jiray socdaalka ayuu la dhacay gaadhigii uu watay kaaso kula dhacay Duleedka Tuulada Oog ee gobolka sool halkaas oo dhaawac culus ka soo gaadhay taliye Qomaluud,
Previous Post: Deg Deg; Daawo Goodax Barre Oo Eedayn U Jeediyey Famaajo
Next Post: Deg Deg:Go’aamo culus Oo Ka Soo Baxay Shir Buuhoodle Ka dhacay,
War reer sool mawaxay taagan yihiin waanala wasay😂🤣
Reer buhodlena geeli habar jeclo bay dhaceen whhi waa yaab tan oo kle
Edoor waa laangaabyo waxana laandheere ah dhulbahante oo ka ah harti oo kasii ah kablalax oo hadana ah daarood ismaaciil,marka maalin cad ayan hargeysa qabsan Karna oo gumeysan Karna wuxuushta ee maan sidaas yeelno tolow
waxaa wax la yaable ha qof leh anoo nin ah ayaa la kufsaday waxaa ka sii daran kuwan soo qoraaya wax laga yakhyakhsoodo waar is la yaaba macquul ma ah nin baa nin kufsanayaa waa sheeko igu cusub sarkaalku magaalo ayuu joogaa oo dumar ka buuxaan kuwan khaatimo news wax ku qorana waxaan leeyahay waar ceebta dadka ka daaya dadkiinana ha ceebaynina
khaniisiinta soow idinku maydan soo horkacin waxay doonaan ayay samaynayaan ,kuyaaca oo kasaara deegaanka qoomul luudka snm
Waar dadka waxan qorayaa miyaan akhlaaqba la barin. Waa in dib loogu noqdaa sida la idiin soo barbraariyo ee edaabta la idiin baro.
Xishoodka laydin ka qaad. War ma waxaasaa wax lagu hadlo ah, inaad ummad dhab caydaan oo tiraahdaan waa qowmuluud. Beentani waa mid xagiina keliya ku kooban oo cid kale oo sheegtay waxan lama hayo. Dadka aad qowmu luud ku sheegeysaan sow abtiyo iyo qaraabo ma tihidin. War sidee wax idinka noqdeen
Is daba qabta oo wax isku fala
Iidoor kkk abaarso miyaa laascaanood yimid walle kuwo badan was halis
Mid Jaamac Siyaad Ah Ayuu Sigay Baa La Yidhi, Taliye Qoomaluud, Mid Bahararsame Ahna Darbigu Ka Dhacay Baa La Yidhi
Idoor kuligood reer abaarso madishaan eygaqurmey ee qowmuluudkaa
isaaq nacaybkiinu ma maantaa tiraahdeen, waa na waseen! kkkkkkk
kkkkkkk war eeyga eeygu dhlay duburta buuran hala waso oo dameeruhu ha wasan war iidorka sidii gaal iyo balaayo dabada uga marayen ayay umada mooden sidooda